Wararka iyo Sheekooyinka aan loo kala soocin Alietc.com - Alietc.com
Safarka Diyaaradaha Mareykanka ayaa garaacay Diiwaan Cusub oo Musiibo kadib
In ka badan 1.3 milyan oo safar diyaaradeed ah ayaa maray baro kontoroollo oo ku yaal garoomada diyaaradaha Mareykanka 'Isbaarooyinka Amniga Gaadiidka Axaddii, oo ah heerkii ugu weynaa tan iyo Maarso 2020. Diseembar, oo ah bil khatar ah oo rakaabka Mareykanka ah inta lagu gudajiro aafada, ayaa la arkay socodsiinta safarada hawada. In kasta oo saraakiisha caafimaadku uga digeen dadka safarka, haddana duulimaadyada ayaa kor u kacay xilliyada fasaxyada sannadka cusub. Ku dhowaad kala badh ka mid ah […]Read More
Ganacsatada waaweyn ee Musalafay ee 2020
Warshadaha tafaariiqda, oo si adag isugu dayay inay soo noolaadaan kahor Covid-19, ayaa waxaa haleelay masiibo sanadkan. David Berliner, La-Taliyaha Musalafnimada iyo Dib-u-habeynta, iyo Wada-hawlgalaha BDO Advisory, ayaa sheegay in ay jireen warshado badan oo musalafay sanadkii 2020 marka loo barbar dhigo sanad ka hor. Waxaad ku arki kartaa dareeris badan shirkado dhowr ah kuwaas oo ah […]Read More
Muxuu Sabuuraddu Muhiim Ugu Tahay Isticmaalka Maalinlaha
Waa maxay Kabadhku? Kabadhku waa boodhadh caato ah oo adag oo korkiisa ku leh cutub dusha sare si loogu hayo warqadda meesha. Kabadh ayaa loo isticmaalaa in lagu xajiyo warqada hal gacan iyadoo lagu dul qorayo kan kale marka sagxadaha kale ee wax lagu qoro aan la heli karin. Isbeddelada Kabadh-gacmeedyada ayaa laga samayn karaa […]Read More
Kula Daryeel Gurigaaga Foornada Meeris ee Ugu Fiican
Waa maxay shooladda dabka lagu shido? Foornada dabka lagu kariyo waa mid si xowli ah ku socota, qolka qiiqa dabka iskuxira oo si joogto ah ugu furan in la daawado. Waxaa loo qorsheeyay in lagu cuno shidaalka caadiga ah ee loo isticmaalo dabka loona isticmaalo dab lagu qurxiyo. Taariikhda shooladda dabka: Bilowga makiinada wax lagu karsado ee casriga ahi waxay ku qasan tahay taariikhda kuleylka gudaha iyo […]Read More
Australia Iyo Xiriirka Ganacsi ee Shiinaha waa la ilaaliyay
In kasta oo dhawaanahan khilaaf ka taagnaa Shiinaha xagga dhoofinta, Australia waxay damacsan tahay inay xiriir adag la yeelato waddanka si ay u ilaaliso barwaaqadeeda. Hogaamiyaasha beeraleyda Australia, oo ka walwalsan isku dhaca Shiinaha, waxay dalbanayaan kala qeybsanaan ka dhexeysa xiriirka dibada iyo ganacsiga caadiga ah ee Shiinaha. Maalmo ka hor, Agribusiness Australia waxay soo saartay warbixin ay ku sheegayso in dakhligeeda beeraha uu hoos u dhacay $ […]Read More
Dhig Dabaqa Dabaqadda Dabaqadda Dabka Kabaha Caano Gaar ah
“Qoob-ka-ciyaarka waa sida inaad cagahaaga ku riyooto.”, Constanze Mozart Maxaa loo yaqaan kabaha qoob-ka-ciyaarka? Kabaha qoob-ka-ciyaarka, ama silsiladda baleedka, waa kabo khafiif ah oo loogu talagalay gaar ahaan qoob-ka-ciyaarka ama cayaarta baleedka. Waxaa laga samayn karaa maqaar jilicsan, maro, ama xariir. Waxay leedahay cirib siman, dhuuban, buuxa, ama go'an. Waa dhaqan in haweenku […]Read More
Maxay Saadka Muhiim Ugu Tahay Meherad Si Loogu Koro
Waxaan uga jeedno saadka: Saadka sida caadiga ah waa nidaam gaar ah iyo hirgalinta hawl adag. Marka la eego dareenka ganacsi ee caadiga ah, Saadka ayaa ah maamulka qulqulka waxyaabaha u dhexeeya barta asalka iyo barta isticmaalka si loo daboolo baahida macaamiisha ama shirkadaha. Shanta shey ee saadka iyo kaalintooda: Cunsurrada saadka ayaa caawisa […]Read More
Nidaamka Digniinta Dabka - Baahida Aasaasiga ah ee Gurigaaga iyo Meheraddaada
Nidaamka digniinta dabka: Qaylo-dhaanta dabka waa qalab iskiis u madax-bannaan ama shabakad dhammaystiran oo qalab lagu rakibay dhisme ama aag. Waxay bixisaa digniino cod dheer ah oo muuqda oo ah dillaaca dabka dhismahaas ama aaggaas. Waxay noqon kartaa otomaatig, semi-otomatik, ama buug. Nidaamka digniinta dabka ayaa lagama maarmaan u ah dhismooyinka, xafiisyada, iyo […]Read More
Guusha Ruwanda ee maaraynta qashinka E-qashinka
Rwanda, dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee joojiya bacaha halista ah, waxay hadda ku tababbaraysaa hab kale oo lagu ilaaliyo deegaanka. Kadib xeerarka iyo nidaamyada sharci dejinta, waddanku wuxuu qaadayaa talaabooyin waawayn oo lagu ciribtirayo ama dib loogu warshadaynayo alaabada elektarooniga ah. Iyada oo xarunteeda burburinta e-qashinka e-qashinka, dalku wuxuu la dagaallamayaa abuurista qashinka. Tusaale ku dayasho mudan waddammada […]Read More